서숙양 서양화가 등 작가 7인, 민주화 투쟁 모금 위해 '아! 미얀마展' 개최:대안을 제시하는 우리들뉴스 #http://www.urinews.org
편집 2021.08.05 [11:41]
서숙양 서양화가 등 작가 7인, 민주화 투쟁 모금 위해 '아! 미얀마展' 개최
6월 16일(수) ~ 6월 21일(월), 서울 명동성당 지하 갤러리1898
우리들뉴스 박상진 기자 | 기사입력 2021/06/14 [16:30]
우리들뉴스 박상진 기자 | 입력 : 2021/06/14 [16:30]
▲ '아! 미얀마 전' 포스터 (사진: 서숙양 서양화가 제공) © 우리들뉴스 박상진 기자
미얀마 민주화 투쟁 모금을 위해 서숙양 작가등 7명의 한국인 서양화가가 뭉쳤다.
"아! 미얀마展"이 오는 2021년 6월 16일(수) ~ 6월 21일(월)까지 서울 명동성당 지하 갤러리1898에서 실시된다.
초대작가 7인전으로 진행되며 평화와 관련된 창작 작품으로 전시 및 판매를 하여 일부 수익금은 미얀마 민주화 투쟁 기금으로 기탁되어 문화예술이 세계 평화와 자유 발전에 기여하는 긍정의 힘을 전달할 예정이다.
이 특별전시전에는 서양화가 김명식, 서양화가 김창한, 서양화가 변해정, 서양화가 박병근, 한지조형예술가 로즈박, 서양화가 서숙양, 서양화가 강라희 작가가 참여한다.
아트팩토리 차만(Art Factory CHAMAN)과 재한 미얀마 청년연대가 주최하는 "아! 미얀마展"은 우리가 겪었던 민주화 과정을 되돌아보고, 민주화 투쟁을 진행 중인 미얀마 국민들과 함께 하려는 메시지를 전달한다.
이번 전시는 미얀마 민주화 투쟁을 지원하기 위한 행사로 국내 미술 작가들이 평화적으로 해결되기를 기원하는 염원을 담아 작품을 출품 하였다. 중견 초대작가 7인전에서 생성된 판매 수익금은 재한 미얀마 청년연대에 기증하여 실질적인 도움이 되기를 희망하고 공모 작가의 작품은 미얀마 민주정부에 전달할 계획에 있다.
서숙양 작가는 작품명 "From the Light" 통해 호박은 좋은 의미로 복이 넝쿨째 들어온다는 뜻에 따라 감사하는 마음과 축복이 생길 수 있도록 긍정의 메시지를 담았다. 또한 빛으로 가득한 세상이 되길 바라는 마음으로 도시 시리즈 그림도 작업하여 반짝이는 미얀마를 꿈꾸고 있다. "Let there be Light" 작품은 빛이 있으라 라는 성경의 첫번째 창조의 말씀처럼 우리의 삶에도 빛이 있길 소망하는 간절한 마음으로 민주화 과정에 있는 미얀마 국민들에게 위로를 주고자 출품 했다. 황금을 활용하여 빛을 그리는 서숙양 작가는 밝고 선한 영향력이 자신의 그림을 통해 발산되어 휴식과 활력이 얻어지길 소망한다.
서숙양 작가는 "자유는 인간이라면 당연히 누려야 권리이며, 지금의 미얀마 사태를 보면서 당연하게 누려야 할 자유에 대한 인간의 갈망을 안타깝게 보고 있다. 자유 민주주의를 위해 투쟁하는 미얀마 시민들을 위해 작가로서 할 수 있는 일을 찾아 전시에 초대 작가로 참여하게 되어 오히려 감사하며, 우리 민주화 상징 중의 한곳인 명동성당의 1898갤러리에서 하게 되어 책임감이 크게 느껴진다."고 말했다.
서숙양 작가는 홍익대 미술대학원 석사 출신이며 회화작품으로 다수의 국내외 전시는 물론 조형 설치미술로도 왕성하게 활동을 하는 작가로 알려져 있다.
▲ 서양화가 서양숙 작가 작품들 (사진: 서양숙 작가 제공) © 우리들뉴스 박상진 기자
အနောက်တိုင်းအနုပညာရှင် Seo Sook-yang အပါအ ၀ င်စာရေးဆရာ ၇ ဦး က '' ဟုတ်တယ်၊ 'မြန်မာပြပွဲ'
Suh Sook-yang အပါအ ၀ င်ကိုရီးယားအနောက်တိုင်းပန်းချီဆရာ ၇ ဦး သည်မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီရရှိရေးအတွက်ငွေကြေးရှာဖွေရန်အတူတကွပူးပေါင်းခဲ့ကြသည်။
'အဟ! မြန်မာပြပွဲကိုဇွန် ၁၆ ရက် (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) မှဇွန်လ ၂၁ ရက် (မွန်) အထိပြခန်း ၁၈၉၈ တွင်ဆိုးလ်ရှိမြောင်းဆောင်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းအောက်၌ကျင်းပမည်။
၎င်းသည်ဖိတ်ကြားခံရသည့်အနုပညာရှင် ၇ ယောက်၏ပြပွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီးငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ပတ်သက်သောဖန်တီးမှုလက်ရာများအဖြစ်ပြသပြီးရောင်းချမည်ဖြစ်သည်။ ရရှိသောအကျိုးအမြတ်အချို့ကိုယဉ်ကျေးမှုနှင့်အနုပညာကအထောက်အကူပြုသောမြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားမှုရန်ပုံငွေသို့လှူဒါန်းမည်ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်လွတ်လပ်ခွင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး။
ဤအထူးပြပွဲတွင်အနောက်ပန်းချီဆရာ Kim Myung-sik၊ အနောက်ပန်းချီဆရာ Kim Chang-han၊ အနောက်ပန်းချီဆရာ Hae-Jeong Byun၊ အနောက်ပန်းချီဆရာ Byeong-geun Park၊ Hanji ပလတ်စတစ်အနုပညာရှင် Rose Park၊ ဒီအထူးပြပွဲ၌တည်၏။
အနုပညာစက်ရုံ CHAMAN နှင့်ကိုရီးယားတွင်မြန်မာလူငယ်ပေါင်းစည်းရေးတို့ကစီစဉ်သော "Ah! Myanmar ပြပွဲ" သည်ကျွန်ုပ်တို့ဖြတ်သန်းခဲ့ရသည့်ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြန်ပြောင်းကြည့်။ ဒီမိုကရေစီအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေသောမြန်မာပြည်သူများနှင့်အတူသတင်းစကားကိုပြသသည်။
ဤပြပွဲသည်မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီရရှိရေးအတွက်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးပြည်တွင်းအနုပညာရှင်များကငြိမ်းချမ်းစွာဖြေရှင်းနိုင်မည့်မျှော်လင့်ချက်ဖြင့်သူတို့၏လက်ရာများကိုပြသခဲ့သည်။ ဖိတ်ကြားခံရသည့်အလယ်အလတ်အဆင့်အနုပညာရှင် ၇ ဦး အားရောင်းချခြင်းမှရရှိသောအမြတ်အစွန်းများကိုကိုရီးယားရှိ Myanmar Youth Solidarity သို့လှူဒါန်းမည်ဖြစ်ပြီးအနုပညာရှင်များ၏လက်ရာများကိုမြန်မာဒီမိုကရက်တစ်အစိုးရသို့ပေးအပ်မည်ဖြစ်သည်။
စာရေးဆရာ Seo Sook-yang ၏အဆိုအရ 'From the Light' ဟူသောခေါင်းစဉ်ဖြင့်ဖရုံသီးသည်ကောင်းမွန်သောကံကြမ္မာ၏အဓိပ္ပာယ်အရကျေးဇူးတင်ကြောင်းနှင့်ကောင်းချီးများကိုခံစားရရန်အပြုသဘောဆောင်သည့်သတင်းစကားရှိသည်။ အလင်းပြည့်ဝနေသောကမ္ဘာ၏မျှော်လင့်ချက်တွင်သူသည်တောက်ပနေသောမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းအိပ်မက်မက်နေပြီးမြို့စီးရီးပန်းချီကားများကိုလည်းလုပ်ကိုင်နေသည်။ အလင်းရှိပါစေဆိုတဲ့အလုပ်ကိုတင်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးသမ္မာကျမ်းစာထဲမှာပထမဆုံးရေးသားခဲ့တဲ့စကားလုံးတွေလိုပဲငါတို့ဘဝမှာအလင်းရောင်ရှိလာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်တောင့်တပြီးဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးဖြစ်စဉ်၌နေသောမြန်မာပြည်သူများကိုနှစ်သိမ့်စေရန်နှစ်သိမ့်မှုပေးခဲ့သည်။ ရွှေကိုအလင်းရောင်ဖြင့်ဆေးသုတ်သည့် Suh Sookyang ကသူမ၏ပန်းချီကားများမှတဆင့်တောက်ပ။ ကောင်းသောသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ထားပြီးအပန်းဖြေမှုနှင့်တက်ကြွမှုကိုရရှိစေသည်။
စာရေးသူ Suh Sookyang က“ လွတ်လပ်မှုဆိုသည်မှာလူသားအားလုံးခံစားသင့်သောအခွင့်အရေးဖြစ်ပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏လက်ရှိအခြေအနေကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်လူတို့သည်လွတ်လပ်မှုကိုတောင့်တသောဆန္ဒကိုသဘာဝကျကျခံစားသင့်သည်ကိုမြင်ရခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ အလုပ်ရှာရန်ပြသခြင်း၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ဒီမိုကရေစီသင်္ကေတတစ်ခုဖြစ်သည့် ၁၈၉၈ Myeongdong ဘုရားရှိခိုးကျောင်းပြခန်း၌၎င်းကိုလုပ်ရန်တာ ၀ န်ရှိသည်ဟုခံစားမိသည်။ ”
Seo Sookyang သည် Hongik တက္ကသိုလ်ဘွဲ့လွန်အနုပညာကျောင်းမှဘွဲ့ရသည်ပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာပြပွဲများတွင်သာမကပန်းချီရေးဆွဲခြင်းနှင့်ပုံသဏ္andာန်နှင့်တပ်ဆင်ခြင်းအနုပညာတွင်ပါ ၀ င်သည့်အနုပညာရှင်တစ် ဦး အဖြစ်လူသိများသည်။
▲ 서양화가 서숙양 작가 작품들 (사진: 서숙양 작가 제공) © 우리들뉴스 박상진 기자
Seven writers including Seo Sook-yang,aWestern painter, 'Ah! Myanmar exhibition' held.. Fundraising for the struggle for democracy
The "Ah! Myanmar Exhibition" to support the struggle for democracy in Myanmar will be held from June 16 (Wed) to June 21 (Mon), 2021 at Gallery 1898 in the basement of Myeongdong Cathedral in Seoul.
It will be held as an exhibition of seven invited artists and will be exhibited and sold as creative works related to peace, and some of the proceeds will be donated to the Myanmar Democratization Struggle Fund to deliver the positive power that culture and art contribute to the development of world peace and freedom.
In this special exhibition, Western painter Kim Myung-sik, Western painter Kim Chang-han, Western painter Hae-jeong Byun, Western painter Byeong-geun Park, Hanji plastic artist Rose Park, Western painter Sookyang Seo, and Western painter Rahee Kang participate in this special exhibition.
"Ah! Myanmar Exhibition", hosted by Art Factory CHAMAN and the Myanmar Youth Solidarity in Korea, reflects on the process of democratization we went through and deliversamessage to be with the people of Myanmar who are fighting for democracy.
This exhibition is an event to support the struggle for democracy in Myanmar, and Korean artists exhibited their works with the hope that they would be resolved peacefully. Proceeds from the sale of the7invited mid-level artists will be donated to the Myanmar Youth Solidarity in Korea to be of practical help, and the artist's works will be delivered to the Myanmar Democratic Government.
According to writer Seo Sook-yang, through the work title 'From the Light', pumpkin hasapositive message so that people can feel gratitude and blessings according to the meaning of good fortune. She also dreams ofasparkling Myanmar by working on city series paintings, hoping that the world will be filled with light. The work 'Let there be Light' was submitted to give comfort to the people of Myanmar who are in the process of democratization withalonging for hope that there will be light in our lives just like the first words of creation in the Bible, 'Let there be light'. Artist Suh Sook-yang, who draws light using her gold, hopes that her bright and good influence will be radiated through her paintings, giving her rest and vitality.
Writer Suh Sookyang said, "Freedom isaright that every human being should enjoy, and looking at the current situation in Myanmar, I see the human longing for freedom that we should naturally enjoy. I am rather grateful to be part of the exhibition in search of work, and I feelagreat sense of responsibility to do it at the 1898 Gallery of Myeongdong Cathedral, one of the symbols of our democracy.”
Seo Sook Yang,agraduate of Hongik University's Graduate School of Fine Arts, is known for her painting works, which have been widely exhibited at home and abroad as well as formative and installation art.
이재명-윤석열 오차범위 각축, 윤석열↑ 이재명↑ 이낙연↓
기상청 특보-호우 강풍 폭염 주의보
인추협, 월주 스님 추모 및 말씀 전해.."인간성회복과 도덕성 세워 우리 2세 바르게 키워야"
(사)한국국방기술학회-육군과학화전투훈련단, 미래 첨단전력 과학기술 발전 교류협력 업무협약 체결
경찰,'21 상반기 사기범죄 특별단속 29,881명 검거 (구속 1,929)
TBS, 한변의 "보도방송 불가" 감사청구에 대해 조목조목 반박
이재명 지지율 당선가능성 몽땅 1위
[천안시] 천안시, 공원 내 체육시설물 이용객 코로나19 단속
[천안시] 하늘그린 거봉포도, 올해 첫 뉴질랜드 수출길
[천안시] 천안시 세무조사 사후관리 강화 17억 8천만 원 추징
[예산군] 예산군 신암면, ‘본인서명사실확인서 무료 발급 체험의 날’ 운영